🥇 akpaaka nke oche enyemaka
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 804
Vidiyo nke akpaaka nke oche enyemaka
Nye iwu akpaaka nke oche enyemaka
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, Automation Desk automation anọwo na-achọsi ike, nke na-anabata ọrụ pụrụ iche iji melite ogo nkwurịta okwu n'etiti ndị ọrụ, na-emezi mkpesa na akwụkwọ nchịkwa, nabata ma hazie ngwa, na zaghachi nsogbu na ọsọ ọkụ. N'ihe gbasara akpaaka, ịkwesighi ichegbu onwe gị na ụfọdụ usoro enyemaka Desk ezughị ezu, onye njikwa anaghị aza arịrịọ ahụ, enweghị ike ịkwadebe ụdị ndị dị mkpa n'oge, nyefee ozi na ndị ọkachamara nrụzi, wee gbanwee gaa na-arụ ọrụ kpamkpam. ọrụ ọhụrụ.
Mmepe USU Software (usu.kz) na-arụ ọrụ na mpaghara enyemaka ndị ọrụ Desk na-akwado ogologo oge, nke na-ekpebi ịdị elu nke akpaaka, ụdị ngwaahịa IT dị iche iche, yana ụdị ọrụ dịgasị iche iche. . Ọ bụghị ihe nzuzo, ọ bụghị nsogbu niile nwere ike zoo site na akpaaka, enwere ike idozi ụfọdụ njehie nhazi na adịghị ike nchịkwa. Ndekọ Desk Enyemaka na-enye ozi zuru ezu gbasara ndị ahịa. Ndị ọrụ enweghị nsogbu na-elele akụkọ ihe mere eme nke arịrịọ, ịchọta nna ukwu efu maka ụfọdụ njirimara ngwa. N'ihe omume nke akpaaka, ọ na-esiri ike ịhapụ nuance nke nwere ike ịme mkpebi. Ọ bụrụ na ndị ọkachamara chọrọ akụkụ ndị ọzọ na ihe ndị ọzọ, ngwá ọrụ pụrụ iche, akụkụ ahụ mapụtara, mgbe ahụ, a na-etinye ozi na akụkọ ahụ, nke a kwadebere site na mmemme akpaaka mgbe emechara nrụzi ahụ. Ikpo okwu Desk Enyemaka na-enye ohere ịnyefe data, ederede na faịlụ eserese n'efu, na-ekesa oke ọrụ na ndị ọrụ nke nzukọ ahụ, na-eleba anya nke ọma na emume nke nrụzi oge. Na-enweghị akpaaka, ọ na-esiri gị ike iso ndị ahịa na-ekwurịta okwu nke ọma, tinye aka na mgbasa ozi SMS, ma gwa onye ahịa naanị na arụchaala ọrụ ahụ. Ọ bụrụ na enweghị nsogbu na otu iwu ma ọ bụ abụọ, mgbe ahụ mgbe enwere ọtụtụ n'ime ha, ụfọdụ ihe isi ike na-ebilite. Uru dị iche iche nke ikpo okwu Desk Enyemaka bụ ikike imeghari ọnọdụ ntọala arụ ọrụ akọwapụtara nke ọma, nke dị oke mkpa na akpaaka. Ụlọ ọrụ ọ bụla na-akọwa ọrụ nke ya: ọrụ ego, nkwurịta okwu na ndị ahịa, mmekọrịta ọrụ, wdg. Mmemme enyemaka Desk aghọwo ebe niile n'ọtụtụ ụlọ ọrụ na mpaghara ọrụ, gụnyere ụlọ ọrụ ọrụ nkịtị, òtù ahụike, ọrụ nkwado onye ọrụ, na ụlọ ọrụ gọọmenti na-ahụ maka ya. nkwurịta okwu na ndị mmadụ. Akpaaka dị ka ihe ngwọta kachasị mma. O siri ike ịchọta oru ngo arụ ọrụ ka mma nke na-agbanwe njikwa n'ụzọ dị ukwuu n'ime nkeji nkeji. Usoro enyemaka Desk na-arụ ọrụ na nkwado ozi ndị ọrụ, na-enyocha ọrụ dị ugbu a na nke akwadoro, na-akwado ụkpụrụ na akụkọ. Site na akpaaka, a na-ebelata oge ịdenye aha ngwa ngwa. Ndị ọrụ adịghị mkpa ịme ihe ndị na-adịghị mkpa. Usoro ndebanye aha na-ewe sekọnd ole na ole. Onye na-eme atụmatụ na-ahụ na arụzi ọrụ niile arụchara n'oge. Ọ bụrụ na ụfọdụ ọrụ chọrọ ihe mgbakwunye, akụkụ na akụkụ mapụtara, mgbe ahụ ọgụgụ isi na-enyocha ngwa ngwa ha dị ma ọ bụ nyere aka ịhazi ngwa ngwa ịzụrụ ihe.
Nhazi oche enyemaka dị mma maka ndị ọrụ niile, n'agbanyeghị nkà na ahụmịhe kọmputa. Site na akpaaka, a na-enyocha nrụzi na ọkwa ọ bụla na ọkwa ọ bụla. E gosipụtara ozi ahụ n'ụdị anya. A naghị egbochi ndị ahịa ịgwa ndị ahịa banyere usoro nrụzi site na SMS-mailing, ịkọ ọnụ ahịa ọrụ, ịkpọsa ọrụ ụlọ ọrụ, wdg. Ndị ọrụ enweghị nsogbu ngbanwe data arụmọrụ na iwu ugbu a, ederede na faịlụ eserese. , ịchọta ọkachamara n'efu maka otu ọrụ. Ọ dị mfe igosipụta metrik arụmọrụ na ihuenyo maka nghọta bara uru na arụmọrụ nke onye ọrụ ọ bụla. Nhazi oche enyemaka ọ bụghị naanị na-esochi omume dị ugbu a na nke akwadoro, kamakwa na-akwado akụkọ na-akpaghị aka, dekọọ arụmọrụ yana chọpụta ọnụ ahịa ọrụ.
Site ndabara, akpaaka oru ngo na-onwem na njikere modul na-aka anyị na usu, ịzụta ihe ndị dị mkpa akụkụ na oge, ọ bụghị na-atụ uche ihe dị mkpa nzukọ, ghara ichefu banyere ẹkụre nke ọrụ deadlines, wdg Integration na elu. ewepụrụghị ọrụ na sistemụ iji mee ka nrụpụta ọrụ ahụ dịkwuo ukwuu. Enwere ike iji mmemme ahụ n'ụzọ dị mfe site na ụlọ ọrụ ọ bụla, ngalaba nkwado kọmputa, na ụlọ ọrụ gọọmentị. Ọ bụghị nhọrọ niile etinyere na nhazi ntọala nke ngwaahịa ahụ. Ụfọdụ atụmatụ dị maka ego. Anyị na-akwado ka ị mụọ ndepụta kwekọrọ. Nhọrọ nke nhazi kwesịrị ekwesị kwesịrị ịmalite na ụdị ngosi iji mara, na-eme ihe, na-amụ ihe na-arụ ọrụ na usoro elementrị. A na-eji usoro azụmahịa mara: nkà na ụzụ dị ugbu a maka mmejuputa usoro azụmahịa, nhazi nke usoro azụmahịa, ngwá ọrụ akpaaka, ngwá ọrụ, usoro, wdg, na-eme ka mmejuputa usoro ahụ pụta ìhè. Ndị isi na-egosi maka ịtụle irè nke usoro azụmahịa bụ ọnụ ọgụgụ nke ngwaahịa nke a nyere àgwà, na-akwụ ụgwọ maka oge ụfọdụ, ọnụ ọgụgụ nke ndị na-azụ ahịa ngwaahịa, ọnụ ọgụgụ nke ahụkarị arụmọrụ na a ga-rụrụ na mmepụta nke ngwaahịa maka a. oge a kapịrị ọnụ, ọnụ ahịa nke mmepụta ihe, ogologo oge ọrụ a na-ahụkarị, itinye ego n'isi obodo na mmepụta, yana onye enyemaka ruru eru dị ka Desk Enyemaka akpaaka.